Hjem > HIV, xuquuqda, covid-19 iyo HivNorge
HIV, xuquuqda, covid-19 iyo HivNorge
HIV, xuquuqda, covid-19 iyo HivNorgeLast ned
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad isaga difaaci karto HIV-ka: Macluumaad dheeraad ah
Haddii lagaa helo cudurka HIV-ka, waxaa laguu gudbin doonaa qaybta la socoshada ee xanuunada caabuga oo lagu siin doono fursad baxnaanin. Dhammaan daaweynta la xiriirta HIV-ka ee Norwey waa lacag la’aan.
Haddii aad u baahan tahay talo sharci ama caawimaad si toos ah ula xiriirta ogaanshaha cudurka HIV-ka, HivNorge ayaa kaa caawin kara. Waxaan sidoo kale leenahay adeeg la-talin guud ah haddii aad qabtid su’aalo kale oo la xiriira HIV-ka.
Markaad la nooshahay HIV-ka, ma jirto halista sii kordheysa ee lagu qaado cudurka coronavirus ama aad ugu xanuunsato cudurka ‘Covid-19’. Haddii aad leedahay habdhis difaaca jirka oo hooseeya (tusaale hadii aad 200 ka hoosayso tirada CD4) iyo cudurro kale oo halista ah, waxaa laga yaabaa inaad ku jirto kuwa halista sare u ah cudurka Koroonaha.
arrow_forwardTallaalka koroonada oo si fudud loo sheegay (Koronavaksine på 123)
arrow_forwardTalaalka fayrusta koroonada – Covid-19 Vaccine Moderna
arrow_forwardTalaalka fayrusta koroonada – Comirnaty (BioNTech og Pfizer)
arrow_forwardIsbeddellada la kulanka dhakhtarka (konsultasjoner) ee Isbitaalka Ullevål